कोरियाले विदेशीहरुलाई नयाँ किसिमको भिजा दिने, हेर्नुस तपाईले यो भिजा पाउनुहुन्छ हुन्न? – Eps Sathi
कोरियाले विदेशीहरुलाई नयाँ किसिमको भिजा दिने, हेर्नुस तपाईले यो भिजा पाउनुहुन्छ हुन्न?
January 13, 2022 1804
दक्षिण कोरियाले विदेशीहरुलाई अब नयाँ किसिमको भिजा दिने तयारी गरेको छ। कोरियाले अहिले विदेशीहरुलाई दिँदै आइरहेको विभिन्न किसिमका भिजाहरुमध्ये अब अर्को नयाँ भिजा प्रकार थपिन लागेको हो। विदेशी स्टार्टअप उध्यमीहरु जसले कोरियामा आएर नविनत स्टार्टअप उध्यम सुरु गर्ने योजना बनाउन सक्षम रहन्छन उनिहरुलाई दक्षिण कोरियाले स्टार्टअप भिजा दिने योजना बनाएको हो।
दक्षिण कोरियाले आफ्नो देशको स्टार्टअप व्यवसायलाई थप गति प्रदान गर्नका लागि क्षमतावान विदेशी स्टार्टअप उध्यमीहरुलाई यस्तो भिजा प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको कोरियाको न्याय मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बुधवार जर्मनीको बर्लिन शहरमा भएको दक्षिण कोरिया – जर्मनी स्टार्टअप इण्डष्ट्रीको बैठकमा कोरियाका न्याय मन्त्रालयका अधिकारी पार्क बोम ख्येले दक्षिण कोरियाले आउँदा दिनहरुमा स्टार्टअप भिजा सम्बन्धि कानून बनाएर लागू गर्ने बताएका हुन।
“कोरियाको स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई थप गति प्रदान गर्नका लागि हामीले विदेशीहरु जो कोरियामा आएर स्टार्टअप उध्यम सन्चालन गर्न चाहान्छन उनिहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। यसका लागि हामी छिट्टै नै स्टार्टअप भिजा लागू गर्ने सोचमा छौं।” कोरियाका न्याय मन्त्रालयका अधिकारी पार्कले बताए।
पार्कले भनेका छन तर यस्तो भिजाका लागि आवेदन दिने विदेशी स्टार्टअप उध्यमीहरुले तोकिएको निश्चित मापदण्ड र योग्यता पूरा गर्नुपर्दछ। यस्ता आवेदनहरु माथि कोरियाली सरकार अन्तरगतको कोरिया च्याम्बर अफ कमर्शसँगको परामर्शमा त्यस्तो भिजा दिने नदिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नेछ।
यसैगरी विदेशीहरु जसको बिज्ञान तथा इन्जिनियरिङ संकायमा शैक्षिक योग्यता मास्टर्स डिग्री वा पिएचडी रहेको छ उनिहरुलाई अहिले पनि कोरियामा लामो समय बसोबास गर्ने भिजा पाउने गरेका छन। उनिहरुलाई सम्बन्धित विश्वविध्यालयको परामर्शमा यस्तो भिजा दिइदै आइएको छ। उनिहरुलाई दक्षिण कोरियामै उध्यम तथा व्यवसाय सन्चालनका लागि अनुमति समेत दिने गरिएको छ।
Prevकोरियन पासपोर्ट विश्वकै दोश्रो शक्तिशाली, नेपाल कति नम्मरमा पर्यो हेरौं?
Nextकोरियाले लागू गर्दै कडा नियम, अब ६० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर उडान गर्नुपर्ने
बौद्धनाथ स्तुप पहिला यस्तो रहेछ, हेरौं अ’चम्म लाग्ने पुराना तस्विरहरु